श व ज ला एर मलामी जब घर फर्किए तब मृ.त.क.ले म सकुशल छु भन्दै घरमा फोन गरे ! « गोर्खाली खबर डटकम
श व ज ला एर मलामी जब घर फर्किए तब मृ.त.क.ले म सकुशल छु भन्दै घरमा फोन गरे !
एजेन्सी । भर्खरै श.व जलाएर म.ला.मी घर फर्किएका थिए । जवान छोराको मृ**त्यु भएपछि बुवा आमा तथा परिवारजन मर्माहत तथा शोका..कूल अवस्थामा थिए । अब म.रे.को मानिस फर्किने भन्ने कुरा थिएन र केवल शो..क गरेर आँ..शु चुहाउनुको विकल्प थिएन । तर एक्कासी घटनाले अविश्वसनीय मोड लियो जब म.रे.र लास समेत ज.ला.इ सकिएको छोराले फोन गरे र आफु सकुशल रहेको बताए ।
भारतको केरालास्थित पुतिंगल मन्दिरमा भएको हालैको आगलागीपछिको घटना हो यो । प्रमोद नामका ती युवकको आगलागीमा परी मृ**त्यु भएको र उनको श**व अस्पतालमा राखिएको खबर आएपछि प्रमोदका परिवारजन तथा आफन्तहरु अस्पताल पुगे ।
सनाखत गरी उक्त शव बुझेर ल्याए र घा***टमा लगेर अन्तिम संस्कार पनि गरे । परिवारमा ठूलो शो**क छाइरहेको थियो । जब ला**सको सतगत गरेर परिवाजन तथा मलामीहरु घर फर्किए तब म**रे भनेर ला**स जलाइ सकिएका ती युवक फोन आयो । प्रमोदले एक्कासी फोन गरेर आफु सकुशल रहेको बताएपछि केहीछिन अघि सम्म शो**काकुल रहेको त्यहाँको वातावरण एक्कासी उल्लासमय बन्यो ।
यसपछि बल्ल खुलासा भयो की प्रमोद ज्यूँदै थिए र जसलाई प्रमोदको ला**स भनेर सतगत गरियो त्यो अरु कुनै युवकको थियो ।
आगलागीको घटनामा घाइते भएर प्रमोद बेहोस बनेका रहेछन् । जब उनको होस आयो, उनले घरमा फोन ठोकिहाले । त्यति बेलासम्म परिवारले प्रमोदको मृ**त्यु भएको खबर पाएर, एउटा लास समेत बुझेर अन्तिम संस्कार समेत गरिसकेका थिए । १ सय ११ जनाको ज्यान जानेगरी मन्दिरमा भएको आगलागीमा प्रमोदको शरीरमा पनि विभिन्न ठाउँमा पोलेर घाउ बनेका छन् ।
जननेता भण्डारीले स्वार्थको किनबेच गर्नुभएन : प्रधानमन्त्री